Wararka Maanta: Axad, Oct 7 , 2018-Senate-ka oo Ansixiyay Garsoore Brett Kavanaugh
50 senator, oo mid kaliya uu Dimuqraaddi ka yahay, ayaa ku codeeyay 'Haa,' halka 48 senator oo wada Dimuqraaddi ahna ay 'Maya' ku codeeyeen.
Quburrada ka faallooda siyaasadda, ayaa sheegaya in magacaabista Kavanaugh ee madaxweyne Donald Trump uu u xushey shaqada maxkamadda sare ay maxkamadda sare ka dhigi doonto mid ay ku bataan garsoorrada muxaafadka ah.
Kavanaugh, ayaa ah 53 jir, waxana shaqada loo igmaday ay tahay mid uu joogi karo inta noloshiisa ka dhiman.
Kavanaugh ayaa baddalaya garsoore Anthony Kennedy, oo dhawaan howl-gab ka noqdey howsha shaqada.
10/7/2018 8:17 AM EST
Axad, October, 07, 2018 (HOL)–Safiirka cusub ee Faransiiska ayaa maanta soo gaartay magaalada Muqdisho,halkaas oo u ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya.